Uyenza njani iKhalenda yokuThengisa ngezeNtlalontle | Martech Zone
NgeCawa, Agasti 2, 2015 NgoMgqibelo, Agasti 1, 2015 Douglas Karr
I-74% yabathengisi ibone ukwanda kwetrafikhi emva kokuchitha iiyure ezi-6 ngeveki kwimidiya yoluntu kunye ne-78% yabathengi baseMelika bathi imidiya yoluntu ifuthe kwisigqibo sabo sokuthenga. NgokukaQuicksprout, ukuphuhlisa ikhalenda yemidiya yoluntu kuya kunceda ukugxila kwisicwangciso-qhinga sakho semidiya yoluntu, ukwaba izixhobo ngokufanelekileyo, kukunceda upapashe ngokungaguquguqukiyo, kwaye uququzelele indlela olungisa ngayo kunye nokwenza umxholo.
Ikhalenda yemidiya yoluntu inokukunceda ngokungagungqiyo ukukhuthaza umxholo ekumgangatho ophezulu, ukunciphisa ixesha olichithayo, kwaye uququzelele kwaye ulawule umxholo. Jonga i-Quicksprout's infographic, Kutheni ufuna iKhalenda yeendaba zeNtlalo kunye nendlela yokuYakha, ngeenkcukacha ezithe kratya zokuba kutheni ufuna ikhalenda yemidiya yoluntu kunye nezicwangciso zokwenza enye.
Singabalandeli abakhuluHootsuite kunye nokubanakho ukucwangcisa uhlaziyo lwentlalo ngokulayisha okuninzi kunye nokujonga ukuthengisa kwimithombo yeendaba zentlalo ngokweembono zabo zekhalenda:
Ungalanda Iitemplate zekhalenda yokuthengisa kwimidiya yoluntu kunye netemplate yokulayisha eninzi ngqo ukusukaHootsuite blog. Sincoma uhlaziyo ngalunye lokuthengisa kumajelo asekuhlaleni kubandakanya oku kulandelayo:
Ngubani - Yeyiphi iakhawunti okanye yeyiphi iakhawunti yobuqu enoxanduva lokupapasha uhlaziyo lwentlalo kwaye ngubani oya kuba noxanduva lokuphendula kuzo naziphi na izicelo?
Intoni - Yintoni oza kuyibhala okanye wabelane ngayo? Khumbula ukuba imifanekiso nevidiyo ziya kongeza kuthethathethwano kunye nokwabelana. Ngaba ukhe waphanda ii-hashtag ukubandakanya ukuqinisekisa ukuba ufikelela kubaphulaphuli ababanzi, abafanelekileyo?
apho -Uwabelana phi ngohlaziyo kwaye uza kulwenza njani uhlaziyo lwejelo opapasha kulo?
Nini -Uza kuhlaziya nini? Kwizithuba eziqhutywa ngumnyhadala, ngaba ubala phantsi ixesha ukuya kumnyhadala? Uhlaziyo oluphambili, ngaba uyaphinda uphinda uhlaziyo ukuze abaphulaphuli bakho balubone ukuba baphoswa luhlaziyo lokuqala? Ngaba unayo imicimbi ejikelezayo enjengeeholide okanye iinkomfa apho kufuneka upapashe ngaphambili, ngexesha nasemva?
Ngoba -Uhlala uphosa, kutheni uthumela olu hlaziyo lwasentlalweni? Ukuqinisekisa ukuba ucinga ukuba kutheni kuya kukunceda ukhumbule ukubizelwa inyathelo onqwenela ukuba umlandeli okanye umlandeli athathe kunye nendlela oza kuyilinganisa ngayo impumelelo yoshicilelo lwentlalo.
Njani - Elinye iqhinga eliphambili elilahlekileyo… uza kulukhuthaza njani uhlaziyo? Ngaba unayo inkqubo yokukhuthaza abasebenzi okanye abathengi ukuba babelane ngayo? Ngaba unayo uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa iposti kumajelo entlalontle apho uhlaziyo lwentlalo luhlala luhluzwa (njengeFacebook)?
tags: ikhalendaikhalenda yokuhlelaikhalenda yentlaloikhalenda yemidiya yoluntuikhalenda yentengiso yemidiya yoluntu
Agasti 5, 2015 kwi-8: 43 AM
Iposti enkulu! Kutshanje ndiqalisile ukusebenzisa i-Twitter, ke kuya kufuneka ndicinge ngezinye zezi ngcebiso ukunceda ukukhuthaza ibhlog yam! Enkosi.